Home Wararka Qarax is-miidaamin ah oo khasaare badan ka dhashay oo Muqdisho ka dhacay
Qarax is-miidaamin ah oo khasaare badan ka dhashay oo Muqdisho ka dhacay
Dhawaaqax xoogan ayaa dhowr daqiiqo kahor laga malay xaafaddo ka tirsan degmooyinka Gobolka Banaadir, kaasi oo ka dhacay degmada Wadajir gaar ahaan Xerada tababarka Ciidanka dowladda ee Nacnaca.
Qaraxa ayaa la sheegayaa in uu ahaa mid Is-miidaamin ah ayaa waxaa fuliyay qof isku soo xiray Jaakad waxyaabaha qarxa, isla markaana waxa uu isku dhex qarxiyey goob lagu tababarayay Askar kamid noqoneysa Ciidanka Milateriga, waxaana wararka qaarkood ay sheegayaan Ninka is qarxiyey uu kamid ahaa Askarta.
Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay qaraxaas oo soo gaaray Askar badan iyo Saraakiil Ciidan oo tababarka bixinayay, in kastoo aan si dhab ah loo cadeyn khasaaraha. Gurmad xoogan oo loo sameeynayo Askarta waxyeelada kasoo gaartay qaraxa ayaa haatan ka socda gudaha Xerada tababarka Ciidanka dowladda ee Nacnaca ee ku taalla degmada Wadajir ee Gobolka Banaadir.
Previous articleShaki soo kala dhex galay Farmaajo & Qoor Qoor. Saadaq Joon & ciidan uu…
Next articleSomalia oo ku eedeysay Kenya in ay dagaal danbiyeed caalami ah ku gashay Soomaaliya
Rw-Kheeyre oo digniin culus u jeediyay Shaqaallaha Xafiiskiisa (Ogoow sababta)
Ciidamo itoobiyaan ah oo ka baxay gudaha Somalia iyo soo dhaweyn...